Radio Sudoorawaz 95 Mhz संघीयताले गाउँ जा भन्छ, त्यसैले गाउँमै बस्छु: नेता, विश्वप्रकाश शर्मा
केही साता अघि नेपालमै पहिलोपटक बृहत ‘स्वास्थ्य महोत्सव’को आयोजना गरेर उनले नयाँ परिचय बनाएका छन् । हालैमात्र काठमाडौं आएका शर्मासँग समसामयिक घटनाक्रमका बारेमा पत्रकार राजन कुईंकेलले गर्नुभएको कुराकानीको अंश:
कति महिनापछि काठमाडौं फर्किनुभयो ?
तीन महिना पछि काठमाडौं आएको हुँ ।
काठमाडौंमा नेताको वरीपरि बसेर राजनीतिक सोच प्राप्त हुन्छ भन्नेहरुलाई के भन्नुहुन्छ ?
काठमाडौंमा रहेका साथीहरु नेताकै वरिपरि मात्र रहनुभएको भन्ने होइन् । काठमाडौंमा बसेर पनि मेची–महाकाली गरिरहनुभएको छ साथीहरु । म झापामै बसेर मेची–महाकाली गरिरहेको छु, फरक यत्ति हो । झापाबाट अलिक गारो होला ओहोरदोहोर गर्न तर सुविधा हामीसँग छ । त्यसैले म गाउँ नै बस्छु र संघीयताले पनि गाउँ नै जाउ भनिरहेको छ ।
तपाईको जस्तो सोच हुने हो भने हरेक दलले माटो वा जनतासँग जोडिएर गर्ने राजनीति महत्व अलिक फरक हुन्थ्यो होला है ?
राजनीतिक दलहरुले संगठन बलियो बनाउने हो भने गाउँ नै जानुपर्छ । जस्तो कांग्रेसको रुखलाई बलियो बनाउने हो भने फ्रेन्डलब्ली दलेर हुँदैन् । रुखको जरामै जल हाल्नुपर्छ, जरामै मल हाल्नुपर्छ । र त्यो भनेको गाउँमै छ ।
तपाईं गाउँमा पुगेर जनताहरुसँग साक्षरता गर्दा अहिलेको राजनीतिलाई जनताले कसरी बुझेका रहेछन् ?
मिश्रित कुरा आएको छ नागरिकको । प्राप्त भएको उपलब्धीप्रति नागरिक खुशी छन् । परिवर्तनप्रति नागरिक खुशी छन् । किनकी मुलुकमा गणतन्त्र आएको छ, शान्ति छाएको छ, पहिचानका स्वरहरुलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास भएको छ । नागरिक पंक्तीमा आत्मविश्वास, आत्मसन्तुष्टी दिएको छ । तर असन्तोष पनि छ । किन उपलब्धी पर्याप्त रुपमा हुन सकेको छैन् । त्यसैले अब सात सालको कुरा होइन ८७ सालमा नेपाल कस्तो बनाउने भन्ने अभियान लिएर मात्र चुनावमा जानुपर्छ ।
नेपालमा धेरै उपलब्धीहरु भए भनिएको छ तर सानो अफ्ठयारो आएपछि यस कारणले काम गर्न सकिएन भनिन्छ । त्यसैले समय पाउँदा हामीले किन गरिरहेका छैनौं ?
यसलाई तुलनात्मक रुपमा हेरिनुपर्छ । हामीले जति गर्नु पर्दत्यो, त्यो भएको छैन् । तर केही भएको छैन भन्नु पनि गलत हो । तर नागरिकले आफैं मुल्याकंन गरिरहेका छन् । पाँच दिन लाग्ने बाटो अब पाँच घन्टामा आउन सकिन्छ । संचार, शिक्षा साथै स्वास्थ्यको सन्दर्भमा धेरै उपलब्धी भएको छ ।
नेताहरुले गर्ने गरेको राजनीति ‘दलाली’ भयो भनिन्छ, यस्तो राजनीतिले गन्तब्यसम्म पुर्याउला ?
राजनीतिकर्मीले गलत प्रश्न गरे भनेर आरोपित नगरौं, पहिले आफूलाई सुधारौं । यतिबेला राजनीति भन्दा ठूलो समस्या केही भएको छैन । तर समाधान पनि राजनीतिले नै गर्छ । त्यसैले आफूलाई परिमार्जन र सुधार गर्नु जरुरी छ ।